सीमा नक्सामा हस्ताक्षरको हतारो « Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha
Nepal Map Before Sugauli Treaty	Personality: Jhamak Ghimire	Government Plans for Kathmandu Metro Railway	ISSUES OF THE GREATER NEPAL: HISTORICAL REFERENCE AND LEGAL QUESTIONS	Laxmi Prasad Devkota: Nepal's Greatest Poet Nepalese people celebrated Moon Festival in Taipei, Taiwan	ANGLO-NEPAL War with East India Company देशभक्ति भावपूर्ण कबिताहरु The Anglo-Nepal War 1814–1816	Hidden History of Nepal Click here to sign in petition
« संविधानसभाका नेताहरूलाई खुला पत्र
Sw Anand Arun Talk in the conference “Buddha, Peace & Nepal” »
सीमा नक्सामा हस्ताक्षरको हतारो
नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर सीमारेखाको ९८ प्रतिशत सीमांकनको काम सम्पन्न भएको छ । यसअन्तर्गत १ सय ८२ थान सीमा नक्सा (स्टि्रप म्याप) तयार भएका छन् । यी नक्सामा दुवै देशका पदाधिकारीले संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनी भारतद्वारा बराबर कुरा उठाइएको छ । भारतका विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको यसपटकको नेपाल भ्रमणका अवसरमा पनि यो कुरा उठ्यो । कृष्णाको भ्रमण दौरानमा वैशाख ९ गते वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल-भारतबीच सीमांकन भएको ९८ प्रतिशत स्टि्रप म्यापलाई हस्ताक्षर गर्न आवश्यक भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि भारतीय विदेश सचिव निरूपमा रावले २०६७ माघ ४ तथा ०६६ भदौ २९, विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले ०६६ माघ १ र विदेश सचिव शिवशंकर मेननले ०६६ असार ७ मा नेपाल भ्रमण गर्दा पनि सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई आग्रह गरेका थिए । यसैगरी नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले यसै दैनिकको ०६६ जेठ ३ मा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा ‘हामीले नेपाल सरकारलाई अन्तिम हस्ताक्षर गरेर स्टि्रप म्यापलाई औपचारिकता दिन अनुरोध गरेका छौं’ भनेका थिए । यसबाहेक भारतीय विदेशमन्त्रीको हैसियतमा प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमणका क्रममा ०६५ मंसिर १० मा ‘करिब ९८ प्रतिशत सीमाक्षेत्र रेखांकन भइसकेको छ र तिनलाई नक्सामा समेत राखिएको छ । ती नक्सामा केही निश्चित सुधारपछि सम्बद्ध अधिकारसम्पन्न अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नेछन्’ भनेका थिए । (कान्तिपुर दैनिक, ०६५ मंसिर १३) ।
यसरी नक्सामा हस्ताक्षर गर्न भारतले पटकपटक आह्वान/आग्रह गरे तापनि नेपालले यसबारे ठोस जवाफ तथा प्रतिक्रिया दिएको पाइँदैन । यसले गर्दा ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न सीमा नक्सामा संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो या होइन ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो भने नेपाल किन बोल्दैन ? हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने हो भने भारतले बारम्बार किन दबाबरूपी आग्रह गरेको होला ? यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त, प्रचलन र परम्परा के छ भन्ने कुरा नै यस मामिलाको छिनोफानो गर्ने मसला हुनसक्छ । सीमा नक्सा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा दुई बुँदा रहेका छन्, प्रथमतः अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त र दोस्रो, पारम्पारिक प्रचलन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अवधारणाअनुसार सीमा नक्सा तथा यससम्बन्धी दस्तावेजमा सिमानाको सम्पूर्ण कार्य -बोर्डर बिजनेस) सम्पन्न भएपछि संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान रहेको छ । बोर्डर बिजनेस पूर्ण भयो भनी नक्साका साथै सीमा बडापत्र -बाउन्ड्री प्रोटोकोल) मा दुवै देशका अधिकारसम्पन्न पदाधिकारी -प्लेनी पोटेन्सियरी) ले संयुक्त हस्ताक्षर गर्ने चलन रहेको छ । यस्तो हस्ताक्षर गरेपछि ती कागजात आधिकारिक सामग्रीमा परिणत हुन्छन् ।
प्रस्तुत प्रसंगमा यदि नेपाल र भारतका पदाधिकारीले ९८ प्रतिशत मात्र काम भएको अर्थात् अपूर्ण कागजातमा सहीछाप गर्छन् भने सीमा प्रोटोकोल तयार गर्ने काम ‘टाढाको कुरा’ हुनसक्छ । अर्काेतर्फ, जब प्रोटोकोल तयार गर्ने समय नै आएको छैन भने आंशिक रूपमा मात्र रहेको नक्सामा सहीछाप गर्न गराउन किन हतारिने ? सीमांकनको अन्तिम बिन्दु भनेको दुवै देशबीच सीमा प्रोटोकोलमा हस्ताक्षर गर्नु नै हो । आंशिक कागजातमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तको विपरीत हुनसक्छ । त्यसैले शतप्रतिशत काम सम्पन्न नभई नक्सामा सहीछाप गर्नु बेतुक हुन्छ । यिनै कारणले त्यस्तो अपूर्ण नक्सामा हस्ताक्षर गर्न नेपालले दिलचस्पी नदेखाएको हुनुपर्छ । स्मरणीय छ, नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको विवाद समाधान भइसकेपछि मात्र दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्री तहबाट नक्सासहितको सीमा प्रोटोकोलमा २०१९ माघ ७ मा संयुक्त हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
चलिआएको रीतिथितिअनुसार यदि दुवै सरकार पूर्णरूपले एकआपसमा मञ्जुर गर्छन् भने सीमा नक्साका दस्तावेजमा पटकपटक गरी हस्ताक्षर गर्न सक्छन् । तर यस सम्बन्धमा मुख्य कुरा के छ भने पटके हस्ताक्षरको सर्तनामा संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले कार्य सुरु गर्नुअगावै निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ ।
यहाँ मननीय कुरा के छ भने सन् १९८१ नोभेम्बरदेखि २००७ डिसेम्बरसम्म काम सुरु गरेकेा नेपाल-भारत प्राविधिक स्तरीय संयुक्त सीमा समितिले सीमांकन सुरु गर्नुअगाडि एकआपसमा यस्तो पूर्वसर्तनामा गरेका छन् या छैनन् ? जहाँसम्म लाग्छ यस्तो प्रावधान कहीँ-कतै उल्लेख गरिएको छैन । अर्कोतर्फ तयारी नक्सामा गल्ती भएकाले निश्चित सुधार गरिने छ भनी भारतीय विदेशमन्त्रीका हैसियतले प्रणव मुखर्जीले भनिसकेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा अपूरो, आंशिक र अशुद्ध सीमा नक्सामा हतारिएर सहीछाप गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, अवधारणा र प्रचलनको विपरीत जानु हो । सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एकैपटक पूर्ण कागजातमा हस्ताक्षर गरे के बिग्रन्छ ? के यत्तिकैले नेपाल र भारतबीचको प्राचीन तथा गाढा सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले अहिल्यै सहीछाप गरिहाल्नुपर्ने हो र ?
सीमा नक्सा कति शुद्ध छ ?
भारतीय विदेशमन्त्रीका हैंसियतमा प्रणव मुखर्जीले नेपाल-भारतबीच ९८ प्रतिशत नक्सांकन सकिए तापनि केही सच्याउनुपर्ने भएकाले सच्याई दुवै देशका अधिकारसम्पन्न अधिकारीले त्यसमा हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरिनेछ भनिसकेका छन् । यसबाट नक्साको कतिपय ठाउँमा त्रुटि रहेको कुरा जान्न सकिन्छ । उनको यो भनाइपछि त्यस्ता सच्याउनुपर्ने खण्डको नक्सा शुद्ध गरियो भन्ने कुरा आजका मितिसम्म सुनिएको छैन ।
अर्को कुरा, स्टि्रप म्यापमा सीमा खम्बाको नेपालतर्फ दसगज र भारततर्फ दसगज गरी बीसगजा क्षेत्र ‘नो-म्यान्स ल्यान्ड’ का रूपमा अंकित गरिएको हुन सक्छ । तर जमिनमा यस्ता दसगजा क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ ? के साँच्चै जमिनमा पनि दसगजा मानवरहित क्षेत्रका रूपमा निर्जन राखिएको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार दसगजा क्षेत्र मानवरहित, निर्माणविहीन, उपयोग र प्रयोगविहीन रूपमा रहनुपर्छ । तर वास्तवमा ठाउँठाउँमा दसगजा क्षेत्र अतिक्रमित भएको पाइन्छ । उदाहरणका निम्ति विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. २० को दरैया क्षेत्रमा रहेको सीमा स्तम्भ नं. १८०/१ तथा २ का बीच करिब आधा किलोमिटर लामो क्षेत्रमा डेढ दर्जन घरटहरा बनाई दसगजाको भूभाग मिचिएको छ ।
यसैले कागजी रूपमा नक्सा अशुद्ध छ भन्नु नक्सा यथार्थपरक नहुनु नै हो । वास्तवमा ९८ प्रतिशत नक्सांकन भएको भन्नुको तात्पर्य २ प्रतिशत काम बाँकी रहेको भन्ने बुझिन्छ । यो २ प्रतिशत भनेको विभिन्न ठाउँको करिब ३७ किलोमिटर सीमारेखाको कुरा आउँछ । यस्तो ३७ किलोमिटर सीमारेखाको कालापानी-लिम्पियाधुरा र सुस्ताबाहेक ५२ स्थानमा ९ हजार हेक्टर नेपाली भूमि विवादित अवस्थामा रहेको छ । यी विवादित क्षेत्रको निक्र्योल नगरी ती सीमा नक्सामा हस्ताक्षर धस्काउनु भनेको त्यस्ता नेपाली जग्गाधनी नागरिकलाई विदेशी बासिन्दामा परिणत गर्नु नै हो । यी कुरा जेसुकै भए तापनि अन्ततोगत्वा एक दिन सीमा नक्सामा संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । तर यस्ता त्रुटिहरू सकेसम्म छिटो शतप्रतिशत सच्याई काम सम्पन्न गरी सीमा प्रोटोकोलमा हस्ताक्षर गर्दै नक्सामा पनि सहीछाप गर्नुपर्छ ।
भारतबाट जति पनि कूटनीतिक तहका व्यक्ति नेपाल भ्रमण गर्छन्, ती सबैले एउटै सुर र तालमा स्टि्रप नक्सालाई वैधानिकता दिन नेपालले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने अनुनय-विनयका रटान दिँदै आएका छन् । भारतलाई किन यस्तो हतारो परेको हो ? यसको छोटो जवाफ हुनसक्छ, यी नक्सामा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल र भारतबीच कालापानी र सुस्ताबाहेक अरू कुनै पनि सीमा विवाद रहेको छैन भन्ने ठोस रूपमा प्रमाणित हुनसक्छ । यसमा नेपालले समयमै बुद्धि पुर्‍याउनुपर्छ ।
सीमा मामिलामा नेपाल बेफुर्सदमा रहेको छ । ऊ अरू नै मामिलामा व्यस्त रहनुपरेको जस्तो छ । मानौं, यहाँ सीमाबारे केही भएकै छैन, केही बोल्ने आवश्यकता नै परेको छैन जस्तो छ । भारतले स्टि्रप म्यापमा हस्ताक्षर गर्नुपर्‍यो भनी आह्वान गर्दा नेपाल सरकारले हुन्छ पनि भन्दैन, हुँदैन भन्ने गरेको पनि छैन । कालापानी र सुस्तामा नेपाल र भारतबीच विवाद रहेको छ भनी भारतले ०६५ मंसिरमा पहिलोपटक मुख खोले तापनि यो क्षेत्र नेपालको हो भारतले अतिक्रमण गरी विवादित तुल्याएको छ भनी नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भनेको सुनिएको छैन ।
अर्को कुरा, नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीले भारतविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गरिरहेछन्, खुला सिमानाका कारण नेपाल-भारत सुरक्षाका बारेमा नेपाल बढी सजग रहनुपर्छ, दस वर्षअघि भारतीय विमान काठमाडौंबाट अपहरण भयो, अब अर्को त्यस्तै घटना भयो भने के हुन्छ ? भनी भारतले नेपालसमक्ष प्रश्न तेस्र्याउने गरेको छ । तर कुनै अर्थपूर्ण सटीक जवाफ फर्काउन नेपाललाई फुर्सद भएको महसुस नेपाली नागरिक समाजले गरेको पाइँदैन । सीमा मामिलामा बोल्ने फुर्सद हाम्रो सरकारलाई कहिले हुने हो, कसैलाई थाहा छैन । थाहा पाउने बेलासम्ममा सबै बिगि्रसकेको नहोस् । सामान्य नागरिकले कामना गर्ने यही नै हो ।
This entry was posted on April 29, 2011 at 10:05 am	and is filed under लेख/ रचना/ निबन्ध/विचार.
Tagged: अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त, एसएम कृष्णा, दसगजा, निरूपमा राव, प्रणव मुखर्जी, बाउन्ड्री प्रोटोकोल, बोर्डर बिजनेस, राकेश सुद, सीमा नक्सा, सीमा बडापत्र, स्टि्रप म्याप, हस्ताक्षर. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.